Xaaskaaga Hooyadeed Ma Isku Dhib Qabtiin ?? Xalka Ugu Fudud Ee Aad Uga Guulaysan Karto Aqriso | shumis.net
Home » galmada » Xaaskaaga Hooyadeed Ma Isku Dhib Qabtiin ?? Xalka Ugu Fudud Ee Aad Uga Guulaysan Karto Aqriso
Xaaskaaga Hooyadeed Ma Isku Dhib Qabtiin ?? Xalka Ugu Fudud Ee Aad Uga Guulaysan Karto Aqriso
Ma ku wareertay sodohdaada oo qaati ma ka taagan tahay xariirkaaga qoys oo qarka ma u saaran yahay in darteed uu u bur buro ? ha niyad wadooyin sahal ah ayaan ku haynaa ee qaado talaadaan
2- Waligaa garabkiisa ahaaw : waligaa ninkaada hakula mur min qoyskiisa hortiisa gaar ahaan labadiisa waalid , wax waliba oo aad doneyso in ninkaada kala doodo ehelka hortooda iska ilaali , oo xita hadaad u careysan tahay qoykiisa hortiisa dhoolacadeyn been saaxib ka dhigo.
3- La xariir ka or inta aysan kula soo xariirin : tani waa talaabo xoogan oo aad qalbiga sodogaaga /sodohaada ku qabsan kartid ha iloobin in salaanta gaarsiiso .
5- Xariifad noqo : hadii sodohdaada oo kula joogta ama dumaashidaada oo marka aad wada cunteysaan u istaagaan in saxamada ay dhaqaan haka yeelin oo qab xariifnimo ah wax kale u dhib yar ku mashquuli tusaale qabashada caruurta ama xitaa in shaah yar qac ka soo siiyaan.
6- Hadii uu jiro is faham la`aan isku day in si degan xaaladda ku daaweyso , waligaa ka fogoow in sheeko dheer aad la wadaagto, xasuunoow kulamaa sheekadada ay badato waxaa sii kordhineysaa in noloshaada wax badan ka ogaadaan , reer magaalnimo sheekada u soo koob.
7- Dhag Jalaq ha siin eedeymaha kaaga imaanaya dhinacooda (sodogaaga iyo sodohdaada) ogaawo Shabakadaan Aad Ku Xirantahay Ee newbanaadir waxa ay kuu sheegeysaa in ay ku daan-daasanayaan ee iska iloow waxa kaaga imaanaya dhankopoda oo maskax adeegso mar waliba .
Title: Xaaskaaga Hooyadeed Ma Isku Dhib Qabtiin ?? Xalka Ugu Fudud Ee Aad Uga Guulaysan Karto Aqriso